DOMY ဓာတုဗေဒ CO ။ , LTD
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကို Yongnan ဓာတုဗေဒစက်ရုံမှ Domy Chemical Co. သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။, Ltd., အရာ၌တရုတ်၏ပထမ ဦး ဆုံးဖလိုရိုက်ပါဝင်သောသွားတိုက်ဆေးကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည် 1999. စီအီးအိုမစ္စတာ၏ ဦး ဆောင်မှုနှင့်အတူ. Yang Zhiquan, ကျွန်ုပ်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှုထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းသည်ပိုမိုအားကောင်းလာနေသည်, နှင့်တဖြည်းဖြည်းပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်အထိတိုးချဲ့, စက်မှုခရီးသွားလုပ်ငန်း, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု, ဖျော်ဖြေရေးယဉ်ကျေးမှု, ယခုအချိန်အထိ၎င်းသည်အမျိုးမျိုးကွဲပြားသောစက်မှုလုပ်ငန်းအုပ်စုတစ်ခုဖြစ်လာသည်.
အဆိုပါကုမ္ပဏီထက်ပိုပြီးနှင့်အတူရေရှည်အပြောင်းအလဲနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆက်ဆံရေးထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည် 50 အရည်အသွေးမြင့်တိုက်ရိုက်ရောင်းချသည့်ကုမ္ပဏီများ, wechat - စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများ, အွန်လိုင်းအရောင်းကုမ္ပဏီများနှင့်သြစတြေးလျနှင့်အခြားနိုင်ငံရပ်ခြားကုမ္ပဏီများ. Infinite အပါအဝငျ, နူ Skin, Kangmei ဆေးဝါး, Tiens အုပ်စု, အရာပါးစပ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှုထုတ်ကုန်စက်မှုလုပ်ငန်း၏ရှေ့ဆောင်ဖြစ်လာသည်.
Domy မှာပညာရှင်တစ်ယောက်ရှိတယ်, စံနှင့်အကျိုးရှိစွာအပြောင်းအလဲနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့, ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားဖောက်သည်များအတွက်အရည်အသွေးမြင့်သော ODM နှင့် OEM ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်. ကျနော်တို့ထက်ပိုပြီးနှင့်အတူရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားပါပြီ 50 ထူးချွန်တိုက်ရိုက်ရောင်း, ပြည်တွင်းပြည်ပရှိအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အီး - ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီများ.
Domy ၏အလုံးစုံအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုသဘောတရားအပေါ်အလေးအနက်ဆိုသည် "ထုတ်ကုန်အတွက်သုညချို့ယွင်းချက်". စမ်းသပ်ခန်းတွင်အဆင့် ၁၀၀၀၀ အဏုဇီဝဗေဒစမ်းသပ်ခန်းနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ဦး ဆောင်သောဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ကိရိယာများရှိသည်.
Domy ထုတ်လုပ်မှုအလုပ်ရုံသည်အဆင့် ၁၀၀,၀၀၀ GMP သန့်ရှင်းသောအလုပ်ရုံဖြစ်သည်, ရာဟလာလ်လွန်ပြီ, GMPC နှင့် ISO22716 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်. ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစင်တာရှိပါတယ် 12 ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ, အဝတ်လျှော်နှင့်ဓာတုအလုပ်ရုံရှိပါတယ် 8 အခု. နှစ်စဉ်သွားတိုက်ဆေးထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သည် 20,000+ တန်ချိန်.
Self- ထောက်ပံ့သွားတိုက်ဆေး၏ထိရောက်သောထုတ်လုပ်မှု၏ထည့်သွင်းစဉ်းစား၌တည်၏, Domy ၏လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီသည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှတင်သွင်းသောနောက်ဆုံးပေါ် PSG အလိုအလျောက်ရေပိုက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းနှစ်ခုရှိသည်, ထက်ပိုမို၏နှစ်စဉ် output ကိုအတူ 250 ရေပိုက်ရေသန်း, ဖောက်သည်များ၏ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်.
ထက်ပိုဆယ်စုနှစ်တစ်နှစ်ခွဲသည်, ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးသွားနှင့်ခံတွင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်. ထိုအပြုံးတစ်ပွုံးသို့ကျယ်ပြန့်ရန်, ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှုထုတ်ကုန်များအထိတိုးချဲ့ခဲ့သည်. ငါတို့သည်လည်းအထူးထုပ်ပိုးတောင်းဆိုမှုများကိုကိုင်တွယ်နိုင်ကြသည်, ထုံးစံဒီဇိုင်းပုလင်းများနှင့် Multi- ထုတ်ကုန်လက်ဆောင်အစုံအပါအဝင်.
သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းအထိ Domy စွမ်းဆောင်ရည်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားအကောင်းဆုံး OEM နှင့် ODM ၀ န်ဆောင်မှုများပေးသည်။.
ကျွန်ုပ်တို့၏ client များ
ငါဒီနှစ်ထုတ်ကုန်သုံးပြီးခဲ့တာပါ, နှင့်ရလဒ်များကိုနှင့်အတူလုံးဝကျေနပ်မိပါတယ်. ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်သောသွားတိုက်ဆေးသည်သွားတိုက်ဆေးအချို့ကျန်ရှိသောအရသာပြီးနောက်ဆိုးဝါးသောအန္တရာယ်မရှိဘဲ၊. ထို့အပြင်, ထိုအားကောင်းသောသွားသေးငယ်သည့်သွားတိုက်ဆေးများကိုကျွန်ုပ်တစ်ခါမျှဂရုမစိုက်ခဲ့ပါ; ဤထုတ်ကုန်သည်သင့်အားအမြဲတမ်းသန့်ရှင်းသောပါးစပ်ကိုခံစားနိုင်စေရန်လုံလောက်သည်.
ငါဒီသွားတိုက်ဆေးကိုကြိုက်တယ်3အထုပ်. ကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟာပြွန်အသစ်တစ်လုံးလိုအပ်သည်အထိဗီရိုထဲမှာသိမ်းထားလိုက်သည်. ငါထဲကတစ်ခုဖယ်ရှားပစ်ရန်ယနေ့ cellophane အထုပ်ကိုဖွင့်လှစ်3သေတ္တာတစ်လုံးသာကျန်နေသေးသော်လည်းပိတ်ထားဆဲဖြစ်သည်. ဒါကြောင့်ငါ့ကိစ္စအတွက်ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့ကြပေလိမ့်မည်သမျှ3တစ်ချိန်ကမှာဖြစ်ရပြီပေလိမ့်မည်သမျှစျေးနှုန်းအမှတ်နှစ်ခုလျှော့ချခဲ့သည်. ပတ်ပတ်လည် cello ဖွင့်ဖို့မစောင့်ပါနဲ့3သေတ္တာများထုပ်. သိမ်းဆည်းခြင်းမပြုမီအကြောင်းအရာများကိုဖွင့ ်၍ စစ်ဆေးပါ
Soothe & Care မှလွဲ၍ မည်သည့်အရာကိုမဆိုအသုံးပြုခြင်းကိုမမေ့ပါနှင့်. အသက်အရွယ်၌ပင်အခေါင်းပေါက်နှင့်သွားဖြူဖြူသွားခြင်းမရှိပါ 71. အကြောင်း5yrs လွန်ခဲ့တဲ့, ဆေးလိပ်သောက်တာကြောင့်အသက်ရှုရတဲ့ပြproblemsနာတချို့ကြောင့်ပါ, ငါစတင်အသုံးပြုခဲ့သည် "ဆေး" ဂျယ်လ်. ဒါဟာအသက်ရှုပြproblemနာကိုဂရုစိုက်, ဒါပေမယ့် yrs ၏စုံတွဲတစ်တွဲနောက်ပိုင်းတွင်, ကျွန်တော်အခေါင်းပေါက်ပေါက်ခဲ့တယ်! တစ် ဦး ကအမြန်စစ်ဆေးမှုများဖော်ပြခဲ့တယ် -- အဘယ်သူမျှမလိုင်တိုက်လေယာဉ်. နီကစ်! နောက်ကျောမောက်ထံသို့သွားလေ၏, ဒါပေမယ့်ရှည်လျားသောဇာတ်လမ်းတို, ယခုဂျယ်လ်နှင့်အတူကပေါင်းစပ်ပါပြီ. အားလုံးကောင်းပါတယ်, သ.
ISO22716 GMPC FDA ကဟလာလ်
OEM သို့မဟုတ် ODM ဝန်ဆောင်မှုကိုရရှိနိုင်ပါသည်, သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်အဖြစ်ထုပ်ပိုး
2021ဇွန် ၄	အထူးပြောစရာမရှိ
2021မေ ၂၄	အထူးပြောစရာမရှိ
Zhongshan အိမ်များ: အကောင်းဆုံးအ ၀ တ်လျှော်ဆေးများကို ၀ ယ်ရန်စိတ် ၀ င်စားသည်
2021မေ ၇၊	အထူးပြောစရာမရှိ
သင်၏အကြောင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုသိရှိပါကသင်၏မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုတုံ့ပြန်နိုင်သည်(s) မင်းရှာနေတာ. ကျေးဇူးပြုပြီးအောက်ပါပုံစံကိုဖြည့်ပါ. ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများမှသင်နှင့်ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်.